Tariq Lamptey Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Tariq Lamptey Akụkọ nwata
Ihe omuma anyi nke Tariq Lamptey na-egosiputa Eziokwu banyere akụkọ nwata ya, Nko mbido ya, ezi na ulo ya, ndi nne na nna, enyi nwanyị / nwunye ya ibu, Net Worth, Web site Life and Personal Life
Na nkenke, nke a bụ akụkọ banyere ndị egwuregwu bọọlụ ọkachamara nke Bekee. Lifebogger na -amalite site na mmalite ya ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Iji mee ka agụụ ịgụ akwụkwọ akụkọ gị na -agụ gị, anyị na -ewetara ahịhịa ya na ebe ngosi nka - nchịkọta zuru oke nke Tariq Lamptey's Bio.
Davide Zappacosta nwa akụkọ Plus na-enweghị isi akụkọ eziokwu
Ndụ na ịrị elu nke Tariq Lamptey.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ masịrị Fans site na ike ya na obi ike ya n'oge ọ mere ka ọ bụrụ onye izizi nke Chelsea na mbụ Frank Lampard.
Ị mechara, ọ ghọrọ Big Chelsea Snub dị ka onye na-eto eto (Reece James) gbochiri ụzọ ya na ndị otu egwuregwu mbụ.
N'agbanyeghị otuto ahụ, anyị ghọtara na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-ewepụta oge iji gụọ akwụkwọ akụkọ Tariq Lamptey nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a, na-ebughị ụzọ, ka anyị bido.
Tariq Lamptey Child Story:
N'ihi na Biography EBIDO, ọ na-eburu aha otutu “Riq“. Tariq Kwame Nii-Lante Lamptey mụrụ na ụbọchị 30 nke Septemba 2000 na Hillingdon, London.
Ndị amụrụ bọọlụ sitere na ezinụlọ Ghan ka amụrụ na mmalite nke narị afọ iri ọhụrụ. Ọmụmụ Tariq bịara n'afọ (2000) ebe ọgba aghara teknụzụ dị ka ekwuola na mbụ ga - eme- emeghị n'ezie.
Enweghị ahụhụ na Y2K na ụgbọ elu dị ka atụghị atụ si n'eluigwe daa. Ọzọkwa, akụ ụta anaghị agbapụ na mberede.
A mụrụ Tariq n'ime ezinụlọ Lamptey bụ ndị dịka nyocha nwere ike bụrụ ndị Alakụba sitere na ezinụlọ sitere na West Africa- Northern Ghana kpọmkwem.
Aha "Tariq" bụ aha ndị Alakụba Arabic pụtara "Morning Star". A mụrụ onye egwuregwu bọọlụ nke mgbọrọgwụ Ghanian dị ka nwa nke abụọ na nwa nwoke nye nne na nna ya mara mma hụrụ ebe a.
Zute ndị nne na nna Tariq Lamptey- Ezigbo nna ya, Ahmed na Mama.
Tariq esiteghi na ezinụlọ bara ọgaranya. Nna ya na mama ya dị ka ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ na Greater London, bụ ndị na-eji ego akwụ ụgwọ ha iji mee ka ezinụlọ ha na-agba ọsọ. Ndị mụrụ Tariq Lamptey nwere ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị efu na ezinụlọ ha.
Onye na-agba bọọlụ nke bụ onye na-akpa afọ ezinụlọ ya toro na ụmụnne ya (otu okenye na ụmụnne nwoke abụọ).
Belowmụnne ya nwoke nke dị ka nke dị n'okpuru ebe a niile ka nọ n'afọ ndụ ha niile na Lọndọn na London nke Hillingdon.
Ọ bụ ezinụlọ nke ndị agha- Lamptey, dị ka a hụrụ, toro na ụmụnne ya nwoke atọ.
Akụkọ ndụ Tariq Lamptey - Nrụpụta ọrụ na agụmakwụkwọ:
Na 2003, Chelsea FC ghọrọ ihe kachasị ọhụrụ Ezinaụlọ klọb na football Fans niile daalụ Roman Abramovich onye nwetara ma tụgharịa klọb ahụ na June 2003.
Ndị mụrụ Tariq Lamptey mụrụ ya n'oge ahụ (ọ dị afọ 3).
N'oge mweghachi nke Chelsea FC, ọtụtụ ezinụlọ kwere nkwa nkwado ha maka klọb ahụ na ezinụlọ Tariq Lamptey abụghị ihe dị iche.
N'ezie, ezinụlọ ya nwere ọmarịcha ịdị nso n'etiti ụlọ ezinụlọ ha ruo àkwà Stamford.
Ị maara?… Obodo London nke Hillingdon ebe ezinụlọ Tariq Lamptey bi adịghị anya n'ebe Stamford Bridge nọ (Ebe egwuregwu bọọlụ Chelsea). Dị ka a hụrụ n'okpuru, ọ bụ naanị nkeji iri anọ na ise.
Youmara home Ezinụlọ Tariq Lamptey nọ na Hillingdon bụ naanị nkeji iri anọ na ise ga-aga Stamford Bridge
Ka Tariq na-etolite ntakịrị, ọ hụrụ football n'anya karịa ihe egwuregwu ọ bụla. N'oge ahụ, onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ ahụ nwere ọredụ Michael Essien - onye ọkpụkpọ sitere na ezinụlọ Ghanian yiri nke ha.
Ịhụnanya Tariq Lemptey maka egwuregwu ahụ kpaliri mmasị ya inweta agụmakwụkwọ football site na agụmakwụkwọ Chelsea FC a ma ama.
N'ezie, ọchịchọ ya ịghọ onye ọkpụkpọ agụmakwụkwọ abụghị ihe efu efu. Obi uto nke ndi nne na nna Tariq Lamptey amaghi oke n'oge ha nabatara nwa ha nwoke na ulo akwukwo a ma ama na London.
Akụkọ ndụ Tariq Lamptey - Ndụ Ndụ Mmalite:
Njem ahụ ịghọ ọkachamara n'ịgba ọsọ malitere na afọ 2008, oge mgbe Tariq (afọ 8) debara aha ya na nkuchi nke Chelsea FC. Ọ bụ nrọ nwatakịrị ọ bụla sonyere na Chelsea FC agụmakwụkwọ.
Mgbe Lamptey debanyere aha ya, ọ chụrụ ọtụtụ ihe n'àjà. E nwere oge ụfọdụ ọ na-atụghị ụbọchị ọmụmụ na ihe ọ na-atụ anya na ezinụlọ ya. Gị n'akụkụ, onye na-eto eto na-eme ihe ọ hụrụ n'anya mgbe niileFootballgba bọl].
N'adịghị ka ọtụtụ ụmụaka Chelsea FC academy ụmụaka bi na ezinụlọ ndị ọbịa (n'ihi ịdị anya site n'ụlọ ha), Okwu Lamptey dị iche dịka ọ bụ nwata nwoke nwere isi ọma.
Ị maara?… FClọ Chelsea FC Academy dị na Cobham ji nkeji 30 gafee ụlọ nna ya na Hillingdon.
Na mbido, nne na nna Tariq Lamptey gbaghaara n'etiti ịkpọga ya Cobham kwa ụbọchị gụnyere inye ya nkwado niile achọrọ ka ọ bụrụ ọkaibe.
Tariq toro site n'ọkwa agụmakwụkwọ na -eso ihe atụ nke esetịpụrụ Michael Essien, onye nlereanya ya. N'oge na-adịghị anya ka ọ nwee mmetụta na ụlọ ọgbakọ.
Akụkọ ndụ Tariq Lamptey - Ụzọ ama ama:
Dị ka a tụrụ anya ya, Tariq gbagoro n'ọkwa agụmakwụkwọ ngwa ngwa ka ọ na -eme nke ọma megide ndị mmegide ya ọkachasị ndị tọrọ ya.
Ozugbo ọ bịarutere afọ iri na ụma ya, nrọ nke ịghọ akụkụ nke ndị isi otu Chelsea bịara sie ike.
Tariq mara iji wee nweta ihe ịga nke ọma, ọ dị mkpa na ya nwere oru teknụzụ sotere “obere chioma“. Ogo a nke oru a biara na uzo ojoo ya nke biara buru ahia ya.
Tariq Lamptey jiri ije ya dị ka ebe ọre ere n'oge agụmakwụkwọ ya
The Turning Point: Oge ntụgharị na ọrụ ntorobịa Tariq Lamptey bịara na oge 2016/2017. Ọ bụ oge o tinyere iko mbụ ya.
Oge ahụ hụrụ ka nwata ahụ na -enyere ndị otu ya aka imeri iko U18 Premier League na -echefu echefu ya na ndị ama ama dịka Marc Guehi, Conor Gallagher na Reece James.
Tariq Lamptey Road to Fame Story- O nyeere ndị otu ya aka inweta U-18 Premier League.
Ọganiihu gara n'ihu gara n'ihu na oge 2017/2018 nke hụrụ nwata nwoke ahụ na -agbakwunye ọtụtụ iko na kabinet ya.
Oge ahụ, Lamptey nyere aka 11 site na aka nri dị ka Chika Okonkwo otu nwere akụkụ anọ a na-enwetụbeghị ụdị ya (iko anọ n'otu oge). Foto dị n'okpuru ebe a bụ nwatakịrị ahụ ka ọ na-enweta ihe ọ rụzuru nke oge 2017/2018.
Tariq Lamptey meriri ihe niile dịka onye ọkpụkpọ mmuta n'oge oge 2017/18.
Akụkọ akụkọ ndụ Tariq Lamptey - Bilie na Ama:
Dị ka anyị hụrụ na mbụ, Lamptey jere ogologo njem ahụ nnabata, otuto na ụgwọ ọrụ site na inweta trophies.
Dị ka ụgwọ ọrụ maka ihe ịga nke ọma ya, Chelsea FC nyere ya ohere ịbanye na nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya. Ọ bụ oge ọ joyụ maka ndị otu Tariq Lamptey ndị hụrụ ihe omume ahụ dum.
Qgwọ Tariq Lamptey maka ịrụsi ọrụ ike bịara mgbe ọ bịanyere aka na nkwekọrịta nkwekọrịta mbụ ya.
Enwere m obi ụtọ na mbinye aka na nkwekọrịta ọkachamara mbụ m na chelsea fc. Achọrọ m ikele ndị ezinụlọ m maka nkwado ha na Chineke maka nduzi ya niile.
Tariq nwere obi ụtọ kesara okwu ọ joyụ ya site na Instagram. Mgbe emechiri nkwekọrịta ọhụrụ ahụ, e bugara Lamptey na otu ndị ntorobịa Chelsea nke ọ gara n'ihu gosipụta uru ya.
Ọ gara n'ihu na -egosipụta nka ya iji nweta ọnọdụ ya na ndị otu Chelsea ma ọ bụ nweta ohere n'aka ndị na -ewe ndị ọrụ klọb ndị ọzọ. N'okpuru ebe a bụ mpempe akaebe vidiyo.
Mpụta ahụ agaghị echefu echefu: Oge ahụ a na-atụsi anya ike mechara rute na njedebe nke 2019. Ebe a na-aga akụkọ: Cesar Azpilicueta nwere obere mmerụ ahụ na onye kachasị Lemptey na-ama ọkwa ya (Reece James) merụkwara ahụ.
Tnke a bụ echiche na-abawanyewanye maka Frank Lampard icho ihe obula nke g’enye nwantakiri olile anya ya aka-nri Ochie Chelsea kwenyere na Tariq Lemptey ma nwee ntụkwasị obi na ọ ga-arụ ọrụ ahụ.
Site na mmerụ ahụ n'akụkụ ya, Lampard chọrọ onye ga-enyere ndị otu ya aka imeri. Ọ chọtara Tariq Lamptey.
Na-efufu 1-0 ma na-ele anya olile anya, Lamptey naputara n'oge Chelsea choro nkpagbu megide ndi ya na ha no Arsenal. Nkụ aka azụ nke 5'4 ghọrọ onye na-eweta nzọ ụkwụ na nkwanye aka na otu ahụ, na-ekwupụta mpụta mbụ ya nke malitere site na mmeri mmeri.
N’enweghị mgbagha, ndị egwuregwu bọọlụ nọ n'isi nke ịhụ onye ọzọ Dani Alves na-eto eto n'ime onyinye nke ụwa n'ihu anya anyị.
Tariq Lamptey na -bụ mmadu n'ezie otu nke kachasị mma n'etiti akara Stamford Bridge na-adịghị agwụ agwụ nke ọkụ na-efe efe-ọkara. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ndụ mmekọrịta Tariq Lamptey:
Site na mmụba ya na ama ama mgbe emechara ndị otu egwuregwu mbụ ya, o doro anya na ọ ga -abụrịrị na ụfọdụ ndị egwu tụgharịrị uche ma Tariq Lamptey nwere enyi nwanyị.
Tnke a abụghị ịgọnahụ eziokwu ahụ na ọmarịcha nwa ihu ya tinyere ụdị egwuregwu ya agaghị etinye ya n'isi ndepụta ọ bụla enyi nwanyị chọrọ.
Ndị na-egwu egwu amalitela ịjụ onye Nwanyị Tariq Lamptey nwere ike ịbụ. Ebe E Si Nweta: Picuki
Mgbe anyị nọrọ ọtụtụ awa na-agagharị na ịntanetị, anyị ejirila nkwubi okwu abụọ. Nke mbu, o yiri n'oge edere, Lemptay emeela ezigbo mgbalị iji kpughee onye enyi ya nwanyị.
Nke abuo, o nwekwara ike ghara ịlụ di na nwunye n'oge edere ya. Enwere ike inwe ike inwe nwunye mana ọ jụrụ ikwupụta ya n'ihu ọha.
Anyị ahụla ndị na -eto eto ọgbọ ya; amasị nke Ismaila Sarr onye lụrụ na Lemptay. Mana otu ihe doro anya, Tariq Lamptey anọghị na njikọ nke nwa nwoke hụrụ n'anya- Phil Foden.
Ndụ nke Tariq Lamptey:
Mata eziokwu nke ndụ Personal Tariq Lamptey na-abụghị ebe egwu ga-enyere gị aka ịmatakwu ụdị onye ọ bụ.
Na-amalite, ọ bụ onye ga-eme ihu ọchị mara mma n'ọnọdụ niile. Site na ntinye aka, Tariq bụ onye na-eme udo nke obi dị nwayọ ma dịkwa njikere ime ihe ọ bụla iji zere ọgba aghara. Ọ bụ nwa nwoke a haziri ahazi nke na-ekwu ụzọ ndụ ya.
Tariq Lamptey Ndụ nke Onwe pụọ na pitch.
Inwe ịdị elu nke mita 1.70 na -egosi na ọ dị mkpụmkpụ. Agbanyeghị, Tariq Lamptey kwenyere na ikike enweghị teknụzụ ga -akwụghachi ya ihe ọ na -enweghị.
Site na pitch, ọ na -adọta mmụọ nsọ Callum Hudson-Odoi, nwanne nwoke Britain nke Ghanian nke dị ka ezinụlọ nye ya.
Na ndụ ya, Lamptey bụ onye ị na-amaghị na ọ bụ ezigbo egwuregwu. Ewezuga bọọlụ, ndị egwuregwu bọọlụ hụrụ n'anya ịfufu awa ole na ole na PlayStation ya (PS4) nwere ike igwu FIFA ma ọ bụ Oku ọrụ (COD). Chọta n'okpuru foto nwatakịrị ahụ na-eme ihe omume ntụrụndụ ya.
Tariq Lamptey hụrụ n'anya igwu egwuregwu vidio nke bụ ihe omume ntụrụndụ ya.
Ndụ Ezinụlọ Tariq Lamptey:
N'akụkụ a, anyị ga-enyekwu ozi gbasara ezinụlọ Tariq Lamptey na-amalite site na nna ya.
More na Nna Tariq Lamptey: Ahmed Lamptey bụ nwoke ahụ ghọrọ nna mpako na 29 Disemba 2019- ụbọchị nwa ya nwoke mere mmalite ọkachamara ya.
Dabere na Ghanaweb, Ahmed Lamptey dị nkọ bụ onye nnọchi anya football nke na-ejikwa ọdịmma ọrụ nwa ya nwoke.
Zute ndị nne na nna Tariq Lamptey n'oge ọ bịanyere aka na nkwekọrịta mbụ ya na Chelsea FC.
N'oge edere, nna Tariq Lamptey Ahmed ka ghe oghe ma nwa ya nwoke kwesịrị ịnọchite anya Ghana ma ọ bụ jigide England.
Ọ bụrụ na ọ họrọ Ghana, mgbe ahụ ọ ga -enweta nwa amaala Ghanian site na nne na nna ya. Dabere na GhanaWeb, nna Lamptey nwere mmasị ịga Ghana.
More na nne Tariq Lamptey:
Nnukwu nne amụọla nnukwu ụmụ na nne Tariq Lamptey abụghị ihe dị iche.
Onye egwuregwu bọọlụ na -ekwu maka ihe ịga nke ọma ya na nzụlite nne ya nyere ya. Nne Lamptey nwere mpako na ọ rụgoro ndị agha ya ọrụ nne nke ọma.
Zute ndị òtù ezinụlọ Tariq Lamptey.
Banyere ụmụnne Tariq Lamptey:
A na -ekwu Tariq Lamptey n'oge a na -ede akwụkwọ bụ onye na -akpa ezinụlọ n'etiti ụmụnne ya nwoke 3 aha ha amaghị.
O yikarịrị ka otu n'ime ụmụnne ya nwoke ga -achọ ịgbaso nzọụkwụ ya. Tariq bụ n'ezie ezi ihe nlereanya nye ụmụnne ya, ọ ga -adịkwa njikere ịkọrọ ha ihe niile ọ maara.
Ndụ Tariq Lamptey:
N'ihi ezigbo nzụlite nne na nna ya, a na -achịkwakarị akụkụ ego nke ndụ Lamptey. N'agbanyeghị ụgwọ ọnwa ya na ụgwọ ọnwa ọ bụla ga -ebili n'ọdịnihu, ọ ga -ekwe omume onye egwuregwu bọọlụ ahụ agaghị agbanwe ndụ ya.
Tariq anaghị ebi ụdị ndụ ugbu a nke nwere nnukwu ụgbọ ala, nnukwu ụlọ, wdg.
Tariq Lamptey anaghị ebi ụdị ndụ ọpụrụiche nke ụdị ụgbọ ala ndị a, nnukwu Mansions wdg
Enwere ezi nguzozi n'etiti ịchekwa na imefu ego. Ọbụlagodi mgbe ọ na -aga Dubai maka ezumike, Lamptey adịkarịghị ekwe ka agụụ mmefu nweta ihe kacha mma na ya. Foto dị n'okpuru, uwe ya na -ekwu nke ọma gbasara ụdị ndụ ya dị ala.
Mata Tariq Lamptey Web.
Eziokwu Tariq Lamptey:
Ndị mụrụ ya nwere mmekọrịta chiri anya na onye bụbu Chelsea (Nkà na ụzụ): Dabere na MirrorOnline, nne na nna Tariq Lamptey nwere njikọ miri emi n'etiti njikwa Chelsea FC.
Ị maara?… Ezinaụlọ ya dị ezigbo nso Michael Emenalo onye bụbu osote onye nchịkwa Chelsea.
Michael Emenalo ghọrọ onye ntụzi nka bọọlụ Chelsea site na 2011 ruo 2017 mgbe ọ gbara arụkwaghịm. Nwoke dị ike dịkwa nso Lampard.
Ndị nne na nna Tariq Lamptey nwere njikọ chiri anya n'ime njikwa Chelsea. Ezinụlọ ya dị nso Michael Emenalo- onye bụbu onye isi nchịkwa Chelsea FC.
You makwaara?… Michael Emenalo nwere mmasị ịhụ Tariq Lamptey na AS Monaco ebe ọ na-arụ ọrụ dị ka onye nchịkwa football. Nke a bụ ihe mere Chelsea ji nwee oke mmasị ịmalitegharị mkparịta ụka ya na Lamptey mgbe ọ rụchara ọrụ izizi ya.
Ihe Nleanya nke CHELSEA AK TEKỌ ND FIRST B FIRST: Tariq Lamptey kesara ahụmahụ ya na ChelseaTV banyere ịbụ onye akpọrọ ka ọ kpọọ na ndị otu egwuregwu mbụ nke Chelsea. N’okwu ya;
“Obi m nọ na-agba ọsọ dị ka ọ na-adịtụbeghị mbụ. Frank [Lampard] gwara m- bụrụ naanị onwe gị, gaa kpọọ egwuregwu gị, pụọ ma nwee ọ .ụ. Anọ m ebe a, anaghị m atụ egwu ihe ọ bụla. Egwuru m egwuregwu eke m, ihe niile gara nke ọma.
Ọ bụ ihe a na-apụghị ikwenye ekwenye na mmetụta dị ịtụnanya inwe. Ọ bụ oge mụ na ezinụlọ m chere kemgbe m batara na klọb n'oge m dị afọ 8. Enweghị m ike itinye ya n'okwu. M ka na-akọ ụnụ. ”
Ọ bụ onye ọkpụkpọ Seventh Academy nke Excell n'okpuru Lampard: Ị maara?… Tariq Lamptey ghọrọ onye gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ Chelsea nke asaa wee mee ụdị egwuregwu mbụ n'okpuru Frank Lampard.
Ọ gbasoro nzọụkwụ nke Egwuregwu Tomori, Reece James, Nkume Mason, na Billy Gilmour.
Ogbugbu: N’egwuregwu bọọlụ nke ugbu a, tomenala attoo bụ ihe ama ama dịka a na-ejikarị ya egosipụta okpukpe mmadụ ma ọ bụ ndị ha hụrụ n'anya. Tariq Lamptey n'oge ederede adịghị egbu egbu. O nweghi inks na aru ya na elu ya.
Religion: Ndị mụrụ Tariq Lamptey zụlitere ya ka ọ nakwere okpukpe Alakụba. Agbanyeghị, enwere ugbu a na - anọghị nke ihe ngosi foto na - egosi Tariq na - ekpe okpukpe ya.
Yana Bruno Fernandes na Diogo Jota, Tariq Lamptey bụ kacha mma Premier League ofbanye nke 2020. Akụkọ ndụ ya na -akụziri anyị na ọkụ na -enwu mgbe niile na njedebe ọwara. Tariq hụrụ ọkụ ahụ na Brighton & Hove Albion Football Club.
Daalụ maka ịgụ Tariq Lamptey Akụkọ nwata anyị gbakwunyere Eziokwu Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.
bụ Tariq mmekọrịta ọ bụla na NIl Lamptey bụ onye gbara bọọlụ maka Coventry n'afọ ndị 1990